March 2022 - Puntland Mirror Believable Media Website
March 31, 2022 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isku shaandhayn kooban ku sameeyay golihiisa wasiiradda, isagoona ballaariyay wasaaraddaha oo ku daray kuwo cusub, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyadda aroornimadii Khamiista. Isku shaandhaynta oo […]
Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Afurur ee gobolka Bari
March 27, 2022 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saakay oo Axad ah weerar ku qaaday deegaanka Afurur ee gobolka Bari, sida bog wareedka Puntland Mirror ay u sheegeen illo-wareedyo katirsan ciidamada. Ma jirto war rasmi ah oo ilaa […]
March 23, 2022 Puntland Mirror 0
Mauqdisho-(Puntland Mirror) Koox hubaysan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Arbaco ah weerar ku qaaday xarunta Xalane oo kutaala Muqdisho, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka. Ilaa labbo nin oo hubeysan ayaa isku dayay in […]
March 20, 2022 Puntland Mirror 0
The head of Somalia’s oil-rich Puntland, Said Abdullahi Deni, announced late Saturday that he’s running for Somalia’s 2022 presidency, following a meeting with new members of parliament elected from that region. The leader, who is […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku dhawaaqay in uu u taaganyahay madaxweynaha Soomaaliya. Deni ayaa hankiisa Villa Soomaaliya kaga dhawaaqay kadib kulan uu la yeeshay xildhibaanada cusub ee Puntland ku matali doona […]
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa ballaariyay cunaqabataynta fiisaha ee ka dhanka ah shakhsiyaad Soomaali ah kadib markii markale ay ku guuldareysteen in ay soo gabagabeeyaan wakhtiga kama dambaysta ah oo ahaa 15-ka Maarso, sida lagu sheegay […]
March 16, 2022 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Hirgelinta Doorashada Heer Maamul Goboleed ee Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah faafiyay liiska guddiyada xulista ergooyinka lixda kursi ee dhiman. Hooska ka akhriso liiska guddiyada. Doorashada lixda kursi ee dhiman ayaa qorshuhu […]
Golaha Wasiiradda Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyad kumeelgaar ah saddex bilood ah
March 13, 2022 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha Wasiiradda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ansixiyay miisaaniyad kumeelgaar ah, taasoo loo qoondeeyay dowladda laga bilaabo April ilaa June 2022, sida uu sheegay Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Wasiirka […]
Doorashada 16 xildhibaan ee Boosaaso oo la soo gabagabeeyay
March 5, 2022 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Doorashada 16 ee xildhibaanada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ayaa maanta oo Sabti ah la qabtay. 16 xubnood oo hal xubin ay dumar tahay ayaa lagu doortay halkaas, sida […]
Al-Shabab car bomb kills at least 15 in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least 15 people have been killed in Mogadishu on Sunday after a car bomb targeting senior officials leaving a military base, security and medical sources say. The car bomb destroyed a minibus [...]